BlueProximity ma ọ bụ otu esi egbochi PC gị mgbe ịnwere iji ekwentị mkpanaaka gị pụọ | Site na Linux
BlueProximity ma ọ bụ otu esi agbachi PC gị mgbe ị na-eji ekwentị mkpanaaka gị pụọ
N’ebe a n’egwuregwu, ikekwe ị nweworị nke gị smartphone, nke n'ezie abịa na Bluetooth. Ekele dịrị ya na obere mmemme akpọrọ BlueProximity (na ị ga-arụnye na kọmputa gị), ị ga-enwe ike igbachi / kpọghee kọmputa gị al mbugharị ma ọ bụ pụta.
N'ime ụwa ejikọtara ọnụ nke anyị bi na ya, ọ bụrụ na enwere otu ngwaọrụ anyị na-anaghị ewepụ, ọ bụ ekwentị mkpanaaka. Maka nke ahụ, n'ihi BlueProximity anyị ga-enwe ike igbochi PC anyị mgbe anyị na-apụ, ruo mgbe anyị na-ejighị ekwentị ahụ laghachi, ọ ka na-egbochi ya. N'ezie anyị nwere ike unlock kpọghee ekwt ya aka, dị nnọọ site na itinye paswọọdụ.
Wụnye ya dị nnọọ mfe ebe ọ bụ na ọ na-achọta fọrọ nke nta niile nchekwa Ndị isi nke distros kachasị ewu ewu.
sudo apt-nweta ngwa blueproximity
Nke mbụ, ị ga-ejikọ kọmputa na ekwentị mkpanaaka. Ozugbo ejiri ekwentị, ọ gaghị ajụ maka paswọọdụ mgbe anyị chọrọ ijikọ kọmputa na ekwentị. Enwere ike ịnweta na ekwentị mkpanaaka gị ga-ajụ gị ịnakwere njikọ nke bụ nchekwa nchekwa ọzọ, ewezuga usoro njikọta. Ekwentị kwesịrị ịnwe nhọrọ iji gbanyụọ ajụjụ a maka mmadụ niile, ma ọ bụ ngwaọrụ pụrụ iche. Kwụsị ajụjụ a anaghị gbanyụọ BlueProximity n’agbanyeghi na ọ baghị uru ebe ọ bụ na ị ga-eme ihe na ekwentị gị mgbe ịlaghachi na kọmputa gị.
Mgbe ịtọsịrị ekwentị ahụ, ịnwere ike ịga n'ihu ma melite BlueProximity. Mgbe ụzọ ọpụpụ ihe mbụ ị kwesịrị ịhụ bụ windo nhazi.
Na mbu taabụ anyị nwere ike ịhazi ekwentị anyị na BlueProximity, maka nke a, anyị ga-eme nyocha ma ozugbo ịchọta adreesị ekwentị anyị ga-ahọrọ.
Iji chọpụta adreesị, ị ga-edozi ekwentị gị na ọnọdụ Bluetooth a na-ahụ anya. O nwere ike ịbụ nhazi ọkọlọtọ, mana ị maghị… Ugbu a pịa bọtịnụ Nyocha maka Ngwaọrụ. Igwe nyocha ga-ewe ihe dịka 10 sekọnd. Ga-achọta ngwaọrụ ahụ mgbe sekọnd ndị ahụ dị na listi ahụ, ikekwe n'etiti ngwaọrụ Bluetooth ndị ọzọ ọ na-achọpụta gburugburu gị.
Ntọala nyocha ntọala
Ugbu a BlueProximity kwesịrị ịmalite ịrụ ọrụ, mana enwere ike ịnwekwu ụda olu chọrọ. Zọ a ị nwere ike ịgbanwe oke nchọpụta wee nwalee ha. Ga-achọpụta otu akara ngosi na-agbanwe ma ọ bụrụ na igwu egwu na ụkpụrụ.
Na nke abụọ taabụ họrọ anya na mkpọchi / kpọghee oge.
Ozugbo emezuru ihe ndị a, a ga-arụ ọrụ ahụ (mkpọchi ma ọ bụ kpọghee).
Ntọala mkpọchi ihe
Gaa na taabụ nke atọ a na-akpọ akpọchi ka ị hụ ihuenyo ndị a:
Akụkụ dị elu na-ezo aka n'iwu ndị BlueProximity ga-eme maka ihe omume ọ bụla ahazi. Ndabara bụ iwu iji kpọchie ma kpọghee ihuenyo site na iji nchekwa desktọọpụ GNOME. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ KDE ị ga-pịa akụ dị ala wee họrọ ntinye xscreensaver. Rịba ama na nke a ga-arụ ọrụ naanị na ụdị KDE nke xscreensaver. Ihe mbu xscreensaver etinyeghi iwu mmeghe.
Ọbịaru nso bụ iwu nke a na-egbu oge ọ bụla ọ ga-eme ma emee ka onye ọrụ nọ nso (agbachi ihuenyo). N'ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike, dịka ọmụmaatụ, igbochi ihuenyo ahụ ịrụ ọrụ mgbe ị nọ nso. Nke a bụ nhazi ọkọlọtọ.
Ngalaba ala na-eme banyere mgbanwe steeti. Ntinye syslog na-enye gị ohere iwepụta ozi syslog na mgbanwe steeti ọ bụla na-abịa site na logfacility ị haziri yana ọkwa nke ịdebanye tupu ịdọ aka ná ntị. I nwekwara ike hazie ya naanị maka ndekọ na ụfọdụ faịlụ.
I nwekwara ike gbanyụọ ileba anya na oge igbochi ma si otú a ị ga-echekwa ọkụ eletrik mgbe ị na-anọghị na kọmputa gị; n'ezie ọ ga-amụnye ọkụ mgbe ị laghachiri. Enwere ike iji iwu ndị a mee ka onye na-enyocha ihe gbanyụọ.
Mkpọchi iwu + mmechi:
gnome-screensaver-command -l && xset dpms gbanyụọ
Kpọghee ekwt + iwu iwu:
xset dpms ike na && gnome-screensaver-iwu -d
Isi: Inetdị Subinet
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » BlueProximity ma ọ bụ otu esi agbachi PC gị mgbe ị na-eji ekwentị mkpanaaka gị pụọ
ịgụta ihe batrị na-eme nzuzu ka ha nwee Bluetooth na mgbe niile
Zaghachi ka marco
Ọ dị ezigbo mma. Ekele,
Ga-adị umengwụ iji pụọ ma ghara pịa igodo igodo, gịnị ma ọ bụrụ na batrị gwụrụ ma jiri kọmputa gị rụọ ọrụ mgbe ị na-apụ? na ihe na-atọ ọchị nke jidere ekwentị gị mgbe ị na-adọpụ uche ma na-eme ka kọmputa gị daa ... o doro anya na enwere nhọrọ mgbe niile iji kpọghee ya na paswọọdụ, mana a ga-enwe ọtụtụ geeks na-ekpori ndụ n'ebe ahụ: p, ọ bụghị jụụ , jụụ
Nke ahụ ziri ezi ... o nwere ọghọm ya, ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha.
Agbanyeghị, ọ bụ otu ọzọ ...
Josue Hernandez Rivas dijo
Ma eleghị anya, ị na-enwe obi ụtọ ma ọ dịghị onye hụrụ ...
Zaghachi Josue Hernandez Rivas
Otu esi ehichapụ akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya na Unitydị n'Otu